Chen lu a qalab yar oo ilaaliya hogaanka qeybtii jaakada - double gacmo - gacmo - Shiinaha Shandong Chen lu
Chen lu a qalab yar jaakad hogaanka ilaaliya bar - double gacmo - darafta
wax: caag Lead
doorka: ilaalinta Shucaaca
4. nooca International cusub ee maqaarka hogaanka ilaaliya, ee aalladda iftiin hoggaamineed oo caalami ah, aalladda khafiif ah, wax ilaaliya aalladda jilicsan, Marka la barbar dhigo dhar hogaanka caadiga ah, miisaan qaraabo ah 25 ilaa 30 boqolkiiba waa la dhimi karaa.
5. waxqabadka ilaalinta Good, qaybinta hogaanka waa labis aad, isticmaalka caadiga ah ee u dhigma hogaanka ma ufududeeyaan doonaa;
6. Waxaad siisaa 0,35 / 0.5mmPb dhiganta hogaanka; Gasho u adkaysta, qalab si sahlan loo nadiif ah dusha si aad u ilaaliso maalgashi inta ugu badan,
Habka kormeerka Product (1) badeecada tijaabiyey in 80 KVP, 32 mas, 72 dhererka focal hoos xaaladda sawir X-ray, ka dibna dhawraan photos of filimka, in filimka X-ray ah, haddii size ee suuqa, ayaa sheegay in kororka dhumucda wax, u nuugo shucaaca waa ka itaal. (2) haddii ay u muuqato mugdi ah, oo dhumucdiisuna waxay ka ah waxyaabaha la in goobta la bedelo. (3) haddii cidhifka kaalinta madow waa cad yahay, waxaa laga yaabaa in ay sabab u dhaawici si wax ilaaliya gudaha, taas oo inta badan sababa isticmaalka khaldan ee dhar badbaadin. (4) haddii ay jiraan qadar yar oo ah dhibco mugdi, waxaa la soo saaray intii lagu soo saarka ee dhar badbaadin, sida pinhole. Waxaa la tijaabiyey by cadeynta daaweynta in bar madow ballaciisu yahay ee wax ka badan 5mm ma saameyn doono saamaynta ilaaliya. Haddii tiro ka mid ah dhibco mugdi badan 5mm waxaa laga helaa, ama dhibco yaryar oo mugdi badan waa in la ogaaday, waa in la ogaadaa. (5) haddii ay jirto hooskii dheer, waxa ay muujinaysaa in caag ah hogaanka jebin laga yaabaa in goobta, taas oo ay sababtay kaydinta aan habboonayn ee dhar badbaadin. Dayactirka Product (1) alaabta this waa in aan loo soo bandhigin qorraxdu si, meel ka il kulayl fog oo aan la xiriiri kartaa alaabta kale sida rinjiga, acid, alkali, iwm (2) alaabta this lagu kaydin doonaa si fiican loo hawo iyo qol qabow oo qalalan. Heerkulka waa 0-30 digrii, iyo heerkulka qaraabo waa 80%. HC06 anti-xidho jaakad hogaanka hal dhinac: style caag hogaanka super jilicsan, xataa jirka content nooca hogaanka: 025, 035, 05mmpb; Model: L, M, S, Baaxadda codsiga: isticmaalo cudurka shucaaca ee ilaalinta jirka aadanaha. Years of isticmaalka: dalkiisa uu leeyahay muddo go'an oo 4-5 sano, aad iyo aad u dhererka isticmaalka ama inta jeer ee la isticmaalo, iyo hubin kartaa saamaynta ay ku nabadgeli karaan joog ka ilaaliya ay u gaar ah. Hubi habka: isticmaal guri inuu taabto ama laga saaro dusha maro, dhawrid isha ciidamada, haddii ay jiraan waa saddex meelood oo meel crack ah, sheyga uma isticmaali karo, waa in la tirtiro update ah. Haddii qiyaasta baare xirfad lagu ogaan karaa heerka uu attenuation shucaaca, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado in wax soo saarka difaaca u baahan tahay in la bedelo.
Previous: Anti-x muraayadaha indhaha ray kooxda / cover / muraayad sports / 600 gacnta
Next: waxyaabaha laga keeno si ay u ilaaliyaan daahan hogaanka double-madaxyo simanna
hoggaami 0.25mmpb Dhar Price
2017 Newest Nooca Fashion Lead Cheap fakaday
Anti Shucaaca dufan Lead
Collar Shiinaha Factory Supply Color kartoo X-Ray Protective Hunguriga Waayo, Qoorta
Custom Made Ilaalinta Naasaha Rubber Lead
kartoo New Design Cheap X Ray Shucaaca Lead Protective fakaday
kartoo X-Ray Protection hoggaami Vest
ilkaha X-Ray hoggaami fakaday
dhar hogaanka Double
Lead Price Good Rubber X Ray Protection goonnada No gacmo dufan
Gloves HD13 Intervenient Shucaaca Protective
Tayada Sare hoggaami fakaday
hoggaami dufan X Ray Protection
dhar Lead qalabka keeno
Sheet Rubber Lead
xir Lead-khafiif ah
Medical Protective Hoggaamiya Protective fakaday
Medical Shucaaca Protective Accessories Products X-Ray hoggaami fakaday
Medical Rediation Protective hoggaami hayayaashii fakaday
Ugxanside Protective X Ray hoggaami fakaday
Protection x-ray dufan hogaanka
Protection Shucaaca hoggaami fakaday Price
X Ray Protection Dhar
X Ray Protective fakaday
X Ray xir Lead Protective
X Ray Dharka Lead Protective
X Ray hoggaami Shiled hayayaashii Protective fakaday
X-Ray hoggaami fakaday
X-Ray hoggaami dufan Waayo, Sale
X-Ray Protection hoggaami fakaday
X-Ray Protective xir
X-Ray Protective Dharka
X-Ray Protective hoggaami fakaday
X-Ray Gloves Lead Protective
X-ray shucaaca ilaaliya dufan hogaanka
X-Ray Shucaaca Protective X-Ray Sheet Rubber Lead
X-Ray gaashamashada hoggaami fakaday
jaakad hogaanka difaaca jilicsan ee la gacmo dheer iyo ...
Super hogaanka jilicsan gel cap qaybinta hogaanka xitaa ...
Nooca cusub ee galkeeda ilaaliya hogaanka leeyahay s no ...